Misoro yeNhau, China, Chikumi, 01, 2022
Chikumi 01, 2022
Misiro yenhau, Chitatu, Chikumi, 01, 2022
Gurukota rinoona nezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube vanoti hurumende ichatora matanho kuona kuti mari dziri kupihwa vanhu zvichinzi nyika inovakwa nevana vayo haipedzisire dzaenda kunotengeswa pamukoto. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti muromo hauzarirwe nerwizi.
Sangano reCommunity Water Alliance roendesa tsamba yenyunyuto kudare reparamende nekanzuru yeHarare kuti vamise chibvumiramo chakaitwa nekanzuru yeHarare nekambani yeGeogenix kunorasirwa marara kuPomona.
Vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika nezuro vamwe mazana matatu nevashanu vachibatwa nechirwere ichi.
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa ndivo vanenge vari munyarikani pamusangano weChamber of Mines Zimbabwe uri kutanga kuVictoria Falls mangwana wakanangana nekusimudzira mabasa ezvicherwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinoshanda mabasa ekubairwa zvitupa mumakambani agara aripo kare kana kuti mamwe achiri kutanga, asi vachipinzwa basa. Asi kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuEdmonton mudunhu reAlberta ku Canada, VaKennedy Bumhira, ivo ndivo vari kutobaira vamwe zvitupa vachivapinza mabasa.
Muchirongwa chanhasi cheDiaspora Forum na8pm, tiri kutarisa nyaya yekodzero yevari kunze kwenyika yekuvhota mushure mekung mutauriri wedare reparamende VaJacob Mudenda vati vapihwewo mukana uyu.